Mapurisa akamisa kutya muMombasa, Kenya, handiti?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kodzero Dzevanhu » Mapurisa akamisa kutya muMombasa, Kenya, handiti?
African Tourism Bhodhi • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • Kenya Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Zvakaitwa neKenya Special Forces ndiko kurumbidzwa kwese kwekushinga kwemapurisa muchikepe cheLikoni kuMombasa, Kenya neMuvhuro.
Kurumbidzwa kwacho kwaive pasina kwekufunga zano rekubvunzurudza mapurisa uye nei mutori wenhau aive nyore pachiitiko achitora chiitiko ichi pane kamera. Mapurisa muKenya aida kusundirwa nenharaunda yaro. Iyi nyaya yekubudirira inogona kubata dambudziko uye nharaunda inotsigira mapurisa anosangana pasi rese panguva yedenda iri.
Mapurisa eKenya mutaundi riri kumahombekombe eMombasa vakasunga vanofungidzirwa kuti magandanga pane izvi zvakabatikana Chikoni chikepe kuyambuka, ndokuwanazve pfuti mbiri dzeAK-47, nhare, uye mabara.
Zvinyorwa pamibvunzo ye twitter kuti sei mutori venhau akawanikwa zvirinyore kutora bundu iri.
Chiitiko ichi chinovhura hurukuro pamusoro pekudyidzana kwenharaunda uye hutsinye hwemapurisa hunokonzerwa nemamiriro ezvinhu eCOVID-19. Aya ndiwo maitiro epasirese.
Chikoni Chikeri ndeye chikepe chesevhari kuyambuka Kilindini Harbor, ndichishandira guta reKenya reMombasa pakati penzvimbo yechitsuwa cheMombasa nenzvimbo yepasi peLikoni. Maviri kusvika mana mana maferi akapera anoshandura kuyambuka chiteshi chengarava, achitakura nzira mbiri netsoka.
Sekureva kwaTripadvisor, iyo Lilkoni inofanirwa-kuve neruzivo kune vashanyi pavanoshanyira nzvimbo yeMombasa yekushanyira muKenya.
Mapurisa muMombasa, Kenya, akabata ndokusunga vaviri vaifungira huwori pakero yekuyambuka yeLikoni neMuvhuro mangwanani.
Tarisa vhidhiyo yeWETUBE yakapihwa nenhengo yeAfrican Tourism Board. Isu takadzora vhidhiyo kuvanhu vakuru nekuda kwezviri mukati kusiri kukodzera vana.
Kunze kwekunge mapurisa awanazve pfuti mbiri dzeAK-47, magazini maviri, mapanga, uye zvombo zvakasiyana. panogona kunge paine zvakawanda kunyaya iyi uye kuti sei yakaitika uye yakagadziriswa nemapurisa akashinga eKenya nenzira yacho.
Muchiitiko chemaminetsi mashanu chakabata vanhu vasingazive, mapurisa akapfura mudenga, akavhara maziso avo vasungwa, ndokuvaisa mumotokari dzemapurisa.
Mumwe mugari wemunharaunda akabvunza paTwitter kuti: "Mamiriro ezvinhu pa Chikoni chikepe yakabata pfungwa dzangu. Chipfeko chinoshanda muchivande chakauya sei, [chakakwanisa kuunza vezvenhau kuti chivaone vachiita? Vaifunga here kuti vaikanganisa hupenyu hwavo nehweveruzhinji? Chinhu chiri kushata chiri kuitika. ”
Mumwe munhu akawedzera, kuti: “How huya pinda makamera zvikwata zvaitova pa-saiti kunyangwe b4 chiitiko chacho? Uye zvakadaro, vakatadza kuwana pfuti kuti isu tione zviso zvemagandanga? "
Mumwe mutapi wenhau weko akataura kuti mapurisa ari kuita zvavakawana mushure mekusunga munhu aifungirwa zvehugandanga kuMombasa, uyo akabva aburitsa pachena nezvekurwisa uku.
Kubata uku kwakauya mushure mekunge hurumende yeUS yapa kuraira kwekufambisa kune vashanyi veAmerica vari kuronga kushanyira Kenya pamusoro penjodzi dzehugandanga.
Vaviri ava vaitakura zvombo kubva kuna Lunga Lunga uye vaiyambuka vachienda kuMombasa, uko kunofungidzirwa kuti vanga varonga kurwisa nzvimbo yekuchengetedza, ingangove nzvimbo yemapurisa.
Mhirizhonga yakawedzera mu Chikoni Chikepe kuyambuka, dunhu reMombasa, mushure memapurisa ekurwisa hugandanga akakurumidza kuita zvehungwaru, vachiita kukamurana mota yanga yoda kungokwira chikepe chakamirira nepfuti zvisiri pamutemo.
Kusimbisa chiitiko ichi, Coast Regional Coordinator John Elungata akati vaviri ava vachabvunzurudzwa nezvezviitiko zvavakange varonga muMombasa.
RAW VIDEO: Kusungwa kwakaitwa vasungwa vaviri neRecce Squad nemapurisa eAnti-Terror paLikoni-Ferry yekuyambuka chiteshi kuMombasa kutanga nhasi uye pfuti dzeAK-47 nemhando dzemabara zvakawanikwa mukubatana uku. pic.twitter.com/N2UmEDzN0D
Mapurisa akataura zvakare kuti vamwe vanhu vachasungwa.
Nhengo dze African Tourism Bhodhi vakurukura nezvechiitiko ichi paATB WhatsApp Group vachiti: "Vanga vachironga kupwanya chikepe mangwanani ano, asi tinotenda Mwari Mauto Akavadzivirira."
Gunyana 20, 2021 pa 13: 36